Ifulethi eliseduze neDuero, eSierra de Urbión - I-Airbnb
Ifulethi eliseduze neDuero, eSierra de Urbión
Molinos de Duero, Castilla y León, i-Spain
U-Alberto uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Itholakala enkabeni yedolobha laseMolinos de Duero, idolobha elisosebeni loMfula iDuero, amakhilomitha ambalwa ukusuka emthonjeni wawo, eSierra de Urbión, ezungezwe izindawo ezinkulu zikaphayini ne-oki, lapho ungajabulela khona imvelo nemizuzu emi-4. ngemoto we Cuerda del Pozo Reservoir lapho ungakwazi ukuqhuba ukudoba namanzi ezemidlalo, ngaphezu kokuba nezindawo ukugeza ifakwe izihambi amasevisi, sokuqasha ubumnandi izikebhe umoya, ukosa inyama yomphakathi, njll
Ifulethi lisesitezi sesibili endaweni yokuhlala enezitezi ezimbili. Uhlelo lokushisisa namanzi ashisayo luhlanganyelwe, luhlukaniswa ngamamitha. Ukushisa kuvulwa kuphela ngenkathi yasebusika (ngokuvamile kusukela ngo-Okthoba kuya kuJuni). Indawo engaphezulu ingu-57 m2 futhi isatshalaliswa futhi ifakwe ngale ndlela elandelayo:
Ziyi-18 m2 ezihlala ikhabethe lodonga, i-TV, usofa, isihlalo sokuzivikela, itafula lokudlela nezihlalo ezi-4, itafula eligoqayo eliphansi elibheke kusofa, ukhaphethi onezinwele ezinde, isibani saphansi nendawo yomlilo. Inendawo yokubeka ekhabetheni odongeni.
I-11 m2 enombhede ophindwe kabili we-135 cm, i-armchair, amatafula amabili aseceleni, ama-rugs amabili amade, isibuko esigcwele ubude kanye nekhabethe elikhulu elinendawo yokugcina.
I-10 m2 enemibhede emibili engu-90 cm eyodwa, itafula phakathi nendawo, ukhaphethi, isibuko esigcwele ubude kanye nekhabethe leminyango emibili elinendawo yokugcina.
8 m2 ifakwe i-4-ring ceramic hob, i-extractor hood, umshini wokuwasha, umshini wokuwasha izitsha, i-microwave, i-toaster, i-mixer, i-ayina nebhodi, ifriji enkulu enefriji kanye nenqwaba yendawo yokugcina emakhabetheni aphezulu naphansi. Inezitsha zasekhishini, izitsha nezinto zokusika, kanye nezitsha nemikhiqizo yokuhlanza eyisisekelo.
Amakamelo amane anokubukwa komgwaqo omkhulu, afinyelela ithala elincane elivela egumbini lokuphumula kanye nekhishi kanye ne-balcony kusuka ekamelweni lokulala 2, lapho ukubhema kuvunyelwe khona, ukunakekelwa ukuthi umusi awudluli ngaphakathi.
Ilinganiselwa ku-4.5 m2 futhi inendlu yangasese, i-bidet, usinki onesibuko neshalofu, ubhavu wokugeza kanye nekhabethe elikhulu elilenga odongeni olusemaceleni.
Kunendawo yokupaka egalaji elizimele, elivaliwe, elisendaweni ephansi yendawo.
Inombolo yepholisi: 42/000007